Nandidy ny hampitsahatra ny fanentanana momba ny Coronavirus ny filoha
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandidy ny hampitsahatra ny fanentanana momba ny Coronavirus ny filoha
Ireo sarimihetsika dia manandrana miady amin'ny Coronavirus manao sarontava sy fonon-tanana ary mitory fanasana tanana mba tsy hiparitahan'ny coronavirus. Ny fampitsaharana ny fanentanana momba ny coronavirus dia ny baikon'ny filoha Peter Mutharika. Izy tenany ihany tamin'ny herinandro lasa no nanambara ny COVID-19 ho loza nasionaly ho an'i Malawi, ary ny antoko mpanohitra dia nivezivezy isan-trano hampianatra ny olona ny soritr'aretina sy ny fisorohana.
Nandidy ny antoko politika mpanohitra i Malawi hiantso ny ezaka ho fanaovana politika amin'ny areti-mandringana. Raha mbola tsy nanamafy ny tranga nahitana ity virus ity i Malawi, dia nandeha nitety isan-trano ny antoko mpanohitra hampianatra ny olona ny soritr'aretina sy ny fisorohana.
Ny mpitondra tenin'ny governemanta dia nilaza tamin'ny Voice of America fa ny hafatra aparitaky ny mpanohitra dia tsy noforonin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana, ka nahatonga ny ezaka ho hetsika politika mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara.
Ny antoko mpanohitra ny Kongresin'ny Kongresin'i Malawi (MCP) sy ny antoko United Transformation Movement (UTM) dia nandeha nitety isam-baravarana tany ambanivohitra mba hampahafantatra ny soritr'aretina sy ny fisorohana.
Rehefa niely nanerana an'i Afrika ny valanaretina coronavirus, dia nanamafy ny fizahana ny valanaretina virus i Malawi isaky ny toerana fidirana sy hopitaly. Nilaza ny manampahefana misahana ny fahasalamana fa olona maherin'ny 500 no arahi-maso raha mbola atokana ho an'ny tenany manokana manerana ny firenena.
Ny olana momba ny fampielezan-kevitry ny antoko politika politika mpanohitra dia tonga satria ny komisiona misahana ny fifidianana ao Malawi ny alatsinainy teo dia nilaza fa hisy ny famerenana ny fifidianana tamin'ny taon-dasa.
Ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana dia nanongana ny fifidianana tamin'ny volana Mey lasa teo, tamin'ny fitanisana ny tsy fanarahan-dalàna marobe. Ny ankolafy filoha Mutharika dia manao antso avo any amin'ny fitsarana tampony.
Airbus dia nanolotra sarontava tarehy avy any Shina hanohanana ny tolona COVID-19 any Eropa
Misokatra ny seranam-piara-manidina Seychelles, mihidy ho an'ny mpitsidika